af-Soomaali - Advokatbyrån Sörmdal AB
Xafiiska qareenka ee Sörmdal waxay ku takhasuseen arrimaha dembiga ah, xuquuqda qofka ajnabiga ah, xuquuqda qoyska iyo xuquuqda la xidhiidha bulshada. Waxaana sidoo kale talo u bixina oo kaaliye u noqonaa dadka caadiga ah iyo shirkadaha. Sidoo kale waxaan waayo aragtinimo dheer ku leenahay wakiil u noqoshada carruurta.
Haddii lagugu tuhmay in aad dembi gashay waxaad mararka badankood xaqq u leedahay qareen (looyar). Waxaa muhiim ah in uu qareenku yimaado wakhtiga ugu horreysa oo goor hore ah, waxaana fiican in uu joogo xilliga wareysiga koowaad. Waxaad adigu u dhiiban kartaa booliiska ra’yigaada ku saabsan cidda aad dooneysid in uu qareen kuu noqdo. Sidoo kale waxaad xaqq u leedahay in aad shaqaaleysatid qareen gaar ah oo kula joogo maadaama ay naadir tahay in ay hey’aduhu shaqaaleeyaan qareen guud xilliga wareysiga koowaad.
Haddii laakiin dhibaato laguu geystay ama dembi lagugu sameeyay waxaad xaqq u leedahay qareenka dhibbanaha oo ku caawiya. Markaas oo kale xittaa waxaad u dhiiban kartaa booliiska ra’yigaada ku saabsan cidda aad dooneysid in ay qareen kuu noqdaan.
Waxaan ka shaqeynaa qeybo badan oo ku dhex jira xuquuqda qofka ajnabiga ah, waxaana ka mid ah qeybahaas magangelyada, oggolaanshaha booqashada, deggenaanshaha, oggolaanshaha shaqada, aasaasidda shirkad, Dublin, xafidid, Eu iyo EES iyo jinsiyadda.
Haddii aad magangelyo ka codsaneysid Iswiidhan waxaad qiyaas ahaan goor kasta xaqq u leedahay qareen guud oo ku caawiya. Qareen guud waxaa magacaabiya caadi ahaan Hey’adda laanta socdaalka, waxaana kharashka bixiya dowladda iswiidhishka ah. Waxaad xaqq u leedahay in aad keligaa dhiibatid ra’yigaada ku saabsan cidda aad dooneysid in uu kuu noqdo qareenka guud marka aad joogtid Hey’adda laanta socdaalka.
Haddii aad dooneysid in aad Iswiidhan timaadid guur daraadiis ama si aad nolosha ula wadaagtid qof, haddii aad dooneysid in aad shaqeysatid ama aad shirkad aasaastid waan ku caawin karnaa inaga oo markaas ah qareen guud ama wakiil. Haddii lagu qabtay waxaad sidoo kale xaqq u leedahay qareen guud oo ku caawiya.
Qeybta xuquuqda qoyska dhexdiisa waxaan ugu horreyn uga shaqeynaa daryeelka iyo mas’uuliyadda carruurta, deggenaanshaha iyo wada socodka.
Xuquuqda la xidhiidha bulshada waxay ka koobantahay qeybo badan. Waxaan ugu horreyn ka shaqeynaa LVU, LVM, LPT iyo LRV, oo kulligood ku saabsan nuuc ka mid ah khasab kula wareegidda daryeelka qofka. Markaas oo kale waxaa la shaqaaleysiin karaa qareen guud, waxaadna sidoo kale xaqq u leedahay in aad dhiibatid ra’yigaada ku saabsan cidda aad dooneysid in uu kuu noqdo qareen guud.
Meesha aan arrinta ka bilaabno waa adiga oo macmiilka ah, waxaana qiimo weyn saarnaa awooda xirfadeed, helitaanka qofka iyo ihtimaamka.